Shacbiga Somaliland Yaanay iska Dhegotirin Dhiilada iyo Dhawaaqa Dhimashada Dunidda. |
Shacbiga Somaliland Yaanay iska Dhegotirin Dhiilada iyo Dhawaaqa Dhimashada Dunidda.
Hargeisa(GNN):-Madax adayg iyo Canaadnimo isbiirsaday ayaa He’ddoodii noqday. Sweden dhayalsiga u dhallanka ah ayaa Soomaalidu, sida riyuhu isu qaadsiiyaan sanbabka, ayuu ugu fiday Fayraska Sadhada ah ee Corona, (Covid19).
Tirada ku dhimatay ayaa fajac gelisay uunkii ay la noolaayeen. Soomaalidu waxa ay dalka Sweden ka noqonayaan 0.69%, hase ahaatee, tirada dadka dalkaas ee Xannuunkan ku nafwaayey ay ka noqdeen Boqolkiiba Siddeed iyo Toban, sida lagu xaqiijiyey warbixin ay qortay 3dii Bishan April haweenay cilmi baadhe ah oo la yidhaahdo Anne Spechard, taasi oo ka duullaysay sahan uu dhinaca Internetka ka qaaday nin la yidhaahdo Cismaan Maxamuud oo ka mid ah Soomaalida degan Australia. Waxaanu ra’yi ururin ka sameeyey Facebook-ga Qurbajoogga Soomaalida ee degan dalalka dibadda,wuxuuna sahankaasi fuliyey Toddobaadkii u dambeeyey Bishii March, 2020.
Dadkii wax la weydiiyey waxa ay sharraxaad ka bixiyeen tirada dhiillada leh ee Soomaalida uu COVID 19 ku khaarajiyey dalka Sweden. Waxyaabaha warbixintaasi ku haaraantay Soomaalida Sweden waxa ka mid ah: in aanay Xaalleynin digniinaha dhinaca caafimaadka; caqabadaha ka haysta xagga luuqada oo horseeday aqoon-darradooda, isku imaatinkooda xad-dhaafka ah, duruufo dhaqaale iyo mushkilado dhaqan bulshood oo isu raacay ayaa Soomaalida taseeyey.
Xubno qurbojoog ah oo ku nool dalal kala duwan, ayaa qiray in Soomaalidu ay sahashadeen Covid19 oo ay dhabarka u soo jeediyeen tilmaamihii dhakhaatiirta iyo feejignaantii ay galeen dadyowga kale ee ay Yurub kula dhaqan yihiin.
Coronavirus waxa uu noqday mid tumaatiyey dhaqaalihii iyo isku socodkii iyo Adduunka. Wuxuu malgay Afar iyo Lixdan Kun, Shan Boqol Toddoba iyo Toddobaatan Qof. Waxa kaloo uu asiibay 1,196,944 qof. dalalka uu ku baahay, waxa weli calanka u sida Talyaaniga, Spain iyo Maraykanka.
Sidoo kale, fayraska Corona wuxuu Afrika u soo galay si walaac leh, isagoo ku xisaabtamaya tamartooda iyo hayntooda kooban, waxana la xaqiijiyey 6,700 oo kiis Afrika gudaheeda, wuxuuna dilay dilay 334 qof.
Haddaba, waxa wax lala yaabo ah; in dhaqankaas aan la mahadin ee Soomaalida Sweden laga soo sheegay aanu cashar u kordhin shacbiga Somaliland oo sidii la rabay aan u fahmin xannuunkan iyo asbaabaha uu ku faafo.
Xukuumadda Somaliland waxa ay qaaday dhawr talaabo oo la xidhiidha sidii ay u xakameyn laheyd fiditaanka xannuunkan oo labadii kiis ee u horreeyey lagu arkay dalka. Waxa Guddida ka hortagga iyo u diyaargarowga Coronavirus ee Somaliland ay horeba hakiyeen dugsiyadii waxbarashada, jaamacadaha, xafladaha iyo shirarka dadka badani iskugu yimaado. Waxyaabaha kale oo ay bulshada si joogto ah uga ugu guubaabiyaan inay isku jirsadaan masaafo hal mitir ah iyo inay dhimaan salaanta gacmaha islamarkaana badiyaan faroxalka hawl kasta kadib.
Waxa soo baxaya in bulshadu wali aanay dhaqangelin tilmaamaha Wasaaradda Caafimaadka iyo qaraarada Guddiga xannuunkan loo xilsaaray. Waxa wali camiran muqaaxiyihii iyo goobihii bulshadu iskugu iman jirtay Coronavirus hortii. Siduu ayuu dadku gacmaha isula boobayaan salaanta. Sidii ayaa safaf dhaadheer loogu galaa xawaaladaha iyo bangiyada.
Haweenka Somaliland ayaa inta badan aad uga feejigan caabuqa Corona, hase ahaatee, waxa dedaalkooda dhantaalaya ragga oo aan hagarbaxayn meelmarinta asbaabaha ka hortagga. Taasina waxay dhalisay in haweenku ka cabsi qabaan in raggu ay fayraskan guryahaha ugu keenaan carruurta.
Ugu dambeyn, waxaan ku soo gunaanadayaa in aynu EEBE talo saaranno isla markaana aynu u hoggaansanno awaamiirta dawladda ee ku wajahan xakameynta Coronavirus, haddii se uu ismaqalku innaga lumo, waxaynu halis u noqonaynaa in xannuunkani innaga sahaydo dad ku dhow inta uu ka dilay dalalka reer galbeedka qaarkood, taasi oo aan inagga go’in. sidaas darteed, maanta ayaa la joogaa in aan go’aansanno wixii inala gudboon.
W/Q:-Wariye Cumar Maxamed Faarax Solna.